ဘဝမှာ တစ်ခါဘဲ မေးခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ မသိစိတ်ဗေဒင် (တစ်ဆင့်ချင်း ဖတ်ပါ ကျော်မဖတ်ပါနဲ့၊ ကျော်ဖတ်မိရင် ဒီဗေဒင်လေး မမှန်တော့လို့ပါ) – Nyi Ma Lay
ဘဝမှာ တစ်ခါဘဲ မေးခွင့်ရှိတယ် ဆိုတဲ့ မသိစိတ်ဗေဒင် (တစ်ဆင့်ချင်း ဖတ်ပါ ကျော်မဖတ်ပါနဲ့၊ ကျော်ဖတ်မိရင် ဒီဗေဒင်လေး မမှန်တော့လို့ပါ)
By Nyi Ma LayPosted on November 6, 2021
အရင်ဆုံးစာရွ တ်လေးနဲ့ဘောပင်လေးအဆ င်သင့်ဘေးနား ထားပေးပါ။ပ ထမဆုံးပြောချင် တာကတော့ ခုရေးထားတဲ့စာေ လးတေကိုေ ကျာ်မဖတ် ပါနဲ့နော် တစ်ဆင်ချင်း လေးဖတ်စေချင် ပါတယ်။ကျော်ဖ တ်မိပြီဆိုရင်ဗေဒင် ကမမှန်နိုင်တော့လို့ပါ။
ပထမအဆင့်- စာရွတ်လွ တ်ပေ ါ်မှာနံပါတ် ၁ ကနေ ၁၁ထိ အစဉ်လိုက် အပေါ်ကနေအောက်ချရေးပါ။ရေးပြီးပြီဆိုရင် နံပါတ် ၁နဲ့ ၂မှာ သင် ကြိုက် တဲ့ကိန်းဂဏ န်းတစ်ခုစီ ကိုချရေးပါ(ဉပမာ-1,2. …….စသည်ဖြင့်)
ဒုတိယအဆင့်-နံပါတ် ၃ နဲ့ ၇ မှာတော့ သင်အတွေးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လိမ်အမည် ကိုချရေးပါ (ကိုယ်က မိန်းကလေးဆို ကိုယ့်အ တွေး ထဲမှာရှိတဲ့ယော ကျာ်းလေးနှစ်ယောက်ပေါ့ )
တတိယအဆင့်-နံပါတ် ၄ ,၅,၆ မှာတော့ သင့်ရဲ့အနီးနားသင့်ပတ်ဝန်းကျင် သင့်အတွေးထဲမှာရှိတဲ့သူသုံးယောက်ကိုရေးပါ။
စတုတ္ထအဆင့်-နံပါတ် ၈,၉,၁၀,၁၁ မှာ သင်လတ်တလောနားထောင်နေတဲ့သီချင်း သင့်အတွေးထဲ မှာရှိနေတဲ့ သီချင်းနာမည်တေ ကိုချရေးပါ။
✴နံပါတ် ၃ မှာရေးထားတဲ့သူကတော့ သင်ချစ်ရတဲ့သူ သင်တန်ဖိုးထားရသူနာမည်လေးပါ။
✴နံပါတ် ၇ မှာရေးထားတဲ့သူကတော့ သင်ကြိုက်ရတဲ့သူ ဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့သူရဲ့နာမည်လေးပါ
✴နံပါတ် ၄ မှာရှိတဲ့နာမည်ကတော့သင်ကဂရုတစိုက်နဲ့အလေးထားရသူ ✴နံပါတ် ၅ မှာရှိတဲ့နာမည်ကတော့သင့်အကြောင်းကို အသိကျွမ်း ဆုံး သူ သင့်စိတ်ကိုအသိဆုံးသူပ
✴နံပါတ် ၆ မှာရှိတဲ့ နာမည်ကတော့ သင့်ကို ကံကောင်းစေတဲ့သူ ကံကောင်းချင်းတေကို ယူဆောင်လာပေးတဲ့သူပါ
✴နံပါတ် ၈ မှာရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးကတော့ နံပါတ်သုံးမှာရှိတဲ့ သူအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်
✴နံပါတ် ၉ မှာရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးကတော့ နံပါတ်ခုနှစ်မှာ ရှိတဲ့သူအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်
✴နံပါတ် ၁၀ မှာရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးကတော့သင် လတ်တလော ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်နဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးလေးတေကို ရည်ရွယ်ပါတယ်
✴နံပါတ် ၁၁ မှာရေးထားတဲ့ သီချင်းလေး ကတော့ ယခုလက်ရှိ သင့်ဘဝကို မြင်နေတဲ့အမြင်လေးကိုရည်ရွယ်ပါတယ
✴နံပါတ် ၂ မှာရေးထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းလေး ကတော့သင် ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်ရမည့် အရေအတွက်လေး ဘဲဖစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ပိုက်ဆံ (သို) မုန့် (သို့)အမွှေးတိုင် ဆီမီးတိုင် တို့ပေါ့နော်
✴နံပါတ် ၁ မှာရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းလေးကတော့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင် နေတဲ့ ဆန္ဒလေးဖြစ်လာဖို့ကြာချိန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။(ဥပမာ-ရက်, လ,နှစ် ပေါ့နော်) ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကကြီးမားရင်တော့ ကြာချိန်က ပိုများနိုင်တာပေါ့နော်။ အားလုံးဘဲ ကံကောင်းကြပါစေ။
အရင္ဆုံးစာရြ တ္ေလးနဲ႔ေဘာပင္ေလးအဆ င္သင့္ေဘးနား ထားေပးပါ။ပ ထမဆုံးေျပာခ်င္ တာကေတာ့ ခုေရးထားတဲ့စာေ လးေတကိုေ က်ာ္မဖတ္ ပါနဲ႔ေနာ္ တစ္ဆင္ခ်င္း ေလးဖတ္ေစခ်င္ ပါတယ္။ေက်ာ္ဖ တ္မိၿပီဆိုရင္ေဗဒင္ ကမမွန္နိုင္ေတာ့လို႔ပါ။
ပထမအဆင့္- စာရြတ္လြ တ္ေပ ၚမွာနံပါတ္ ၁ ကေန ၁၁ထိ အစဥ္လိုက္ အေပၚကေနေအာက္ခ်ေရးပါ။ေရးၿပီးၿပီဆိုရင္ နံပါတ္ ၁နဲ႔ ၂မွာ သင္ ႀကိဳက္ တဲ့ကိန္းဂဏ န္းတစ္ခုစီ ကိုခ်ေရးပါ(ဉပမာ-1,2. …….စသည္ျဖင့္)
ဒုတိယအဆင့္-နံပါတ္ ၃ နဲ႔ ၇ မွာေတာ့ သင္အေတြးထဲမွာေပၚလာတဲ့ ဆန႔္က်င္ဘက္ လိမ္အမည္ ကိုခ်ေရးပါ (ကိုယ္က မိန္းကေလးဆို ကိုယ့္အ ေတြး ထဲမွာရွိတဲ့ေယာ က်ာ္းေလးႏွစ္ေယာက္ေပါ့ )
တတိယအဆင့္-နံပါတ္ ၄ ,၅,၆ မွာေတာ့ သင့္ရဲ့အနီးနားသင့္ပတ္ဝန္းက်င္ သင့္အေတြးထဲမွာရွိတဲ့သူသုံးေယာက္ကိုေရးပါ။
စတုတၳအဆင့္-နံပါတ္ ၈,၉,၁၀,၁၁ မွာ သင္လတ္တေလာနားေထာင္ေနတဲ့သီခ်င္း သင့္အေတြးထဲ မွာရွိေနတဲ့ သီခ်င္းနာမည္ေတ ကိုခ်ေရးပါ။
✴နံပါတ္ ၃ မွာေရးထားတဲ့သူကေတာ့ သင္ခ်စ္ရတဲ့သူ သင္တန္ဖိုးထားရသူနာမည္ေလးပါ။
✴နံပါတ္ ၇ မွာေရးထားတဲ့သူကေတာ့ သင္ႀကိဳက္ရတဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး သင့္အတြက္ မျဖစ္နိုင္တဲ့သူရဲ့နာမည္ေလးပါ
✴နံပါတ္ ၄ မွာရွိတဲ့နာမည္ကေတာ့သင္ကဂ႐ုတစိုက္နဲ႔အေလးထားရသူ ✴နံပါတ္ ၅ မွာရွိတဲ့နာမည္ကေတာ့သင့္အေၾကာင္းကို အသိကၽြမ္း ဆုံး သူ သင့္စိတ္ကိုအသိဆုံးသူပ
✴နံပါတ္ ၆ မွာရွိတဲ့ နာမည္ကေတာ့ သင့္ကို ကံေကာင္းေစတဲ့သူ ကံေကာင္းခ်င္းေတကို ယူေဆာင္လာေပးတဲ့သူပါ
✴နံပါတ္ ၈ မွာေရးထားတဲ့ သီခ်င္းေလးကေတာ့ နံပါတ္သုံးမွာရွိတဲ့ သူအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္
✴နံပါတ္ ၉ မွာေရးထားတဲ့ သီခ်င္းေလးကေတာ့ နံပါတ္ခုႏွစ္မွာ ရွိတဲ့သူအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္
✴နံပါတ္ ၁၀ မွာေရးထားတဲ့ သီခ်င္းေလးကေတာ့သင္ လတ္တေလာ ခံစားေနရတဲ့ခံစားခ်က္နဲ႔ သင့္ရဲ့ စိတ္ကူးေလးေတကို ရည္ရြယ္ပါတယ္
✴နံပါတ္ ၁၁ မွာေရးထားတဲ့ သီခ်င္းေလး ကေတာ့ ယခုလက္ရွိ သင့္ဘဝကို ျမင္ေနတဲ့အျမင္ေလးကိုရည္ရြယ္ပါတယ
✴နံပါတ္ ၂ မွာေရးထားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေလး ကေတာ့သင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ လုပ္ရမည့္ အေရအတြက္ေလး ဘဲဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ပိုက္ဆံ (သို) မုန႔္ (သို႔)အေမႊးတိုင္ ဆီမီးတိုင္ တို႔ေပါ့ေနာ္
✴နံပါတ္ ၁ မွာရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေလးကေတာ့ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာျဖစ္ခ်င္ ေနတဲ့ ဆႏၵေလးျဖစ္လာဖို႔ၾကာခ်ိန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။(ဥပမာ-ရက္, လ,ႏွစ္ ေပါ့ေနာ္) ကိုယ့္ရဲ့ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵကႀကီးမားရင္ေတာ့ ၾကာခ်ိန္က ပိုမ်ားနိုင္တာေပါ့ေနာ္။ အားလုံးဘဲ ကံေကာင္းၾကပါေစ။
Previous post တစ်ချိန်တုန်းက အရမ်းကြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ သိန်းတစ်ထောင် နီးပါးပေးစီးခဲ့ရတဲ့ MARK II (ရွှေငါး)
Next post ကိုယ့်ရဲ့ နေအိမ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မစိုက်သင့် မစိုက်အပ်သော အပင်များ